विभेद: गैरदलितको समस्या हैन र ? | Kattwal.com
मनभरि थरीथरीका प्रश्न खेल्छन् : किन गरियो हामीलाई यस्तो अपहेलना ? हामीले के नराम्रो गरेका थियौं र, हामीलाई यसरी विभेदको शिकार बनाइयो ? किन हाम्रा आवाज अझै पनि गुम्सिएका छन् ? दलित समुदायमा मात्र होइन, गैरदलित समुदायमा पनि चेतनाको कमी देखेकी छु । यो समस्या दलितहरूको मात्रै हुन सक्दैन, यो त गैरदलितको समस्या बेसी हो । यो समस्या सिङ्गो राज्यको हो । तर पढेलेखेका, आफूलाई बौद्घिक श्रेणीमा राख्नेहरूले पनि यो समस्या अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ । मेरो अनुभवले त यही भन्छ ।
जति बेला मेरो परिवार न्याय चाहन्थ्यो, ती गैरदलित नै थिए, जसले जातीय विभेदलाई समस्याको रूपमा हेरेनन्, न्यायको समस्याको अर्थमा बुझेनन् । उनीहरूले विभेद गर्नुलाई हकअधिकार ठाने । अब हाम्रो आन्दोलनले, हाम्रो आवाजले निर्णय गर्नुपर्छ, हामी विभेदको अन्त्य गर्न चाहन्छौं भनेर । यस्तै यस्तै सोचेर हिँडेकी छु म आजभोलि । केही वर्षको संघर्षपछि आफ्नो समुदायको हितको काममा लाग्ने विचार छ मेरो । मैलेजस्तै अरु बालबालिकाले यस्तो हिंसात्मक व्यवहार सहन नपरोस् भनेर धेरै काम गर्नु छ मैले । तर कसरी गर्छु ? के गर्छु ? थाहा छैन । दलितरिडरबाट
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री सुवेदीले लिए सपथ